chii chimiro chakajairwa cheyedzo yekushandisa?
Kuru Kushandisa Michina Chii chinonzi Chimiro Dhizaini reAkienda Bvunzo?
Chii chinonzi Chimiro Dhizaini reAkienda Bvunzo?
Tinofanira sei kuronga edu otomatiki bvunzo? Zvinotonyanya kukosha, tingaite sei kuti yedu otomatiki bvunzo dzigadzirire uye dzidzike?
Yese automated bvunzo inofanirwa kuve ichisimbisa kupesana neiyo kana yakawanda yakatemwa mamiriro. Ndokunge, patinenge tichigadzira otomatiki bvunzo, isu tinofanirwa kuziva kuti mhedzisiro yechiito inofanira kunge iri kuitira kuti tikwanise kuisa zvirevo zvekuyera zvakakodzera munzvimbo.
Zvoga zviedzo zvinofanirwa kumhanyisa otomatiki pasina kupindira kwebhuku. Zvakare, mhedzisiro yema automated bvunzo inofanirwa kuve yekufungisisa uye kuvimbika.
Asi isu tinozviita sei izvi?
Mhinduro yacho iri nyore asi imwe iyo inowanzo kuregeredzwa uye ndiko kuti, kushandiswa kwe data rinodzorwa .
Kuti timhanye bvunzo, tinoda zvinhu zvitatu:
Icho chinhu chimwe chinonyanya kukanganisa maitiro echikumbiro ndeche data ; Dhata iro rinodiwa neshoko uye iyo data iyo yakapihwa iro.
Kuenzanisira izvi, funga nezve e-commerce application uko vashandisi vanogona kutsvaga zvigadzirwa.
Peji remhedzisiro yekutsvaga raizotarisa uye nekuzvibata zvakasiyana kana paine zvigadzirwa mudhatabhesi pane kana iyo dhatabhesi isina chinhu.
Zviripachena miedzo yedu yazvoga inofanirwa kutevedzera matunhu akasiyana ekushandisa uye kutarisa maitiro akasiyana.
Kana isu tichitsvaga chigadzirwa uye tichiona zvinyorwa, tingaite sei kuti tipe mhedzisiro? Tingave sei tine chokwadi chekuti iyi data ndizvo zvatinotarisira? Zvakare, tingaite sei kuti maitiro aya adzokorore kuitira kuti pane ese matsva anotumirwa tiwane zvakafanana mhedzisiro?
Maitiro Ekuita otomatiki Miedzo Deterministic
Nei isu tichida yakadzorwa dhata mune otomatiki bvunzo?
Ini ndinokupa iwe muenzaniso weyetsika yakaipa iyo yandinowanzoona ichiitwa mune otomatiki bvunzo:
Muedzo wakashata kwazvo ndewekuti isu tinotsvaga chigadzirwa uye isu tinosimbisa kuti tinowana zvimwe zvinyorwa zvinoratidzwa. Hatisi kuzotarisa zvakadzika - chero bedzi paine zvigadzirwa zvinoratidzwa pane peji, saka isu takanaka. KUPENGA!
Nehurombo, izvi zvaizosiya mimwe mibvunzo isina kupindurwa:
Tinoziva sei kuti iyo data iri kuuya kubva kune chaiyo dhatabhesi? Isu takabatana kune kuseka server ine data yekuseka?
Tinoziva sei kuti iyo data yakadzoserwa ndizvo chaizvo zvatakatsvaga?
Tinoziva sei kuti chaiyo nhamba yezvinhu inoratidzwa mune yekutsvaga mhinduro peji?
Tinofanira kukwanisa kutaura pamusoro pemhedzisiro yebvunzo. Izvo zvirevo zvinoda kuve zvine musoro uye kuva chechokwadi cheki.
Kana isu tikasadzora data, saka hatina nzira yekuziva kana kutarisa mibvunzo iri pamusoro.
Kuti tiite otomatiki bvunzo dzinoenderana, isu tinofanirwa kudyara iyo data isu pachedu. Iwo otomatiki bvunzo dzinofanira kupinza inozivikanwa data uye kusimbisa mhedzisiro inopesana neiyo data.
Kana isu tikangovimba nedata iro rinoshandiswa nemamwe maitiro uye iro rinogona kuchinja, saka edu otomatiki bvunzo dzaisazo vimbika. Hatina nzira yekumisikidza mhedzisiro.
Maitiro Ekuita Zvemuchina Miedzo Dzokororo
Automated bvunzo dzinofanira kumhanya zvoga. Mune fashoni yechokwadi michina, bvunzo dzinokonzereswa nemaitiro akadai seCI / CD yekuvaka pombi iyo inodzora kuitiswa uye kutaurwa kwemiedzo.
Zvekare, mashandiro atinoita dhata anokanganisa kuvimbika nekudzokororwa kwemiedzo yakazvimiririra.
Chimiro chechimiro cheyakanaka otomatiki bvunzo ndeye
1 - Setup [Gadzira inozivikanwa data]
2 - Bvunzo [Shandisa iyo yakagadzirwa data]
3 - Teardown [Paradza data rakagadzirwa]
Gadzira Bvunzo Dhata
Nei tichifanira kumisikidza iyo bvunzo data nguva dzese? Izvi hazvisi kuzotinonotsa isu pese patinomhanyisa bvunzo here? Hatigone kungoimisa kamwe chete tobva tashandisazve data rakafanana?
Zvakanaka, tinoziva sei zvinoitika kune iyo data mushure bvunzo yapera? Zvichida bvunzo yemumwe munhu yagadzirisa kana kudzima iyo data?
Tingave sei nechokwadi mune inotevera nguva yatinoda kumhanyisa bvunzo imwechete, iyo data yatovepo kuti isu tishandise?
Paradzai Bvunzo Dhata
Nei tichifanira kuparadza data rekuyedza rakagadzirwa?
Nekuti pakuitwa kunotevera, kana isu tichiedza kugadzira data rekuyedza, pachave nekwakadzokororwa data kana zvakatonyanya isu tinogona kuwana kunze kwekukandwa mumiyedzo.
Kana isu tikasabvisa iyo bvunzo dhata uye tichiramba tichidzokorora zvisina kujairika bvunzo dhata, saka zvakanaka, nguva yekuwedzera iyo dhatabhesi ichave iine yakawanda data rekuyedza uye isu tichava nemamwe matambudziko.
Saka ive shuwa yekugadzira uye kuparadza yako bvunzo data.
Kuti titore iyo yakanyanya kukosha kubva kune kwedu bvunzo kushandisa michina, isu tinofanirwa kugadzira yakanaka bvunzo ine yakanaka chimiro.
Imwe nzira yatingaite kuti miedzo yedu itaurike uye iitwe kudzora data rekuyedza. Panzvimbo pekuvimba nedata riripo rekuyedzwa, bvunzo dze otomatiki dzinofanira kudyara iyo data sedanho rekutanga kune zviitiko zvinomhanya.
Nekudyara kwedu pachezvako bvunzo dhata, tinogona kuyedza kune akasiyana mamiriro. Uyezve, isu tinogona kuve nechokwadi chekuti zvirevo zvirevo zviri kutarisa kune inozivikanwa data. Izvi zvichaita kuti bvunzo dzigadzirire.
Kumhanya otomatiki bvunzo zviitiko kakawanda, tinofanirwa kuona kuti bvunzo dzedu dzinogadzira iyo bvunzo dhata tisati taita zviitiko. Izvi zvinoitwa muchikamu chekumisikidza ye otomatiki bvunzo.
Zviitiko zvacho zvaizoshandisa iyo data yakagadzirwa mudanho rekumisikidza.
Chekupedzisira kana tapedza kuyedza, isu tinofanirwa kuve nenzira yekuchenesa nharaunda yekuyedza nekubvisa chero rakagadzirwa data. Izvi zvinoitwa muchikamu che teardown cheyedzo yekushandisa.
Bvunzo otomatiki matipi uye akanakisa maitiro
Edza otomatiki zano reanogadzira mapurojekiti
nyora kune csv faira python
yakanakisa mms app yeiyo Android 2015
iphone 11 vs kucherechedza 10 kuwedzera
iPhone 8 vs Samsung Galaxy S8: selfie kamera kuenzanisa
Yakanakisa iPhone 12 / Pro yekumba screen widgets
Virgin Mobile USA kuvhura risingaperi 4G WiMax Hotspot & Dongle Chivabvu 31
Samsung Galaxy Watch 3 LTE vs Bluetooth chete: ndeupi muenzaniso waunofanira kutenga?
Yemazuva Ano Kurwisa 5: Kudzima magetsi ikozvino kusununguka paApple neIOS
Google Fi inowedzera Samsung smartphones kuchipiro chayo, inoratidza 5G network yekuvhara mepu
Gatling Yekukurumidza Refer - Yakajairika Gatling Mabasa
Alcatel OneTouch Inotyisa XL ine Windows 10 maoko-on
Mahwendefa mashanu epamusoro ane octa-core processor
Maitiro ekuparadza yako GPS nzvimbo pane Android mu2020